June 2013 ~ IT Guide Myanmar
4:06 PM Root လုပ်နည်း No comments
Posted by Viraj SK in Samsung Galaxy Ace Plus | 103 comments
Rooting Has Been Made Easy For The Big Brother of Samsung Galaxy Ace Gt-S5830 viz. Samsung Galaxy Ace Plus S7500.Now In This Article We Will be Checking Out That How Can Root & Install Custom Recovery (Used For Flashing Custom ROMs) On Your Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500.
So Let Us Head To The Further Part of This Artucle Where We Will See All The Required Things For Rooting Galaxy Ace Plus S7500.
Note : Rooting Device Voids it’s Warranty.So Please Root Your Device At Your Own Risk (Warranty Can be Retained by Flashing Stock Gingerbread Firmware Released By Samsung).
Essential Steps Before Rooting Samsung Galaxy Ace Plus S7500 :
Procedure To Root & Install Custom Recovery For Samsung Galaxy Ace Plus S7500:
At First, You Need To Download Custom Recovery & The Rooting Package For Galaxy Ace Plus S7500 Which is Mentioned Below.
CWM Recovery For Galaxy Ace Plus S7500.
Rooting Package For Galaxy Ace Plus S7500 (RootMe.zip).
Now Turn Off Your Phone & Enter Into The Downloading Mode.Downloading Mode Can Be Entered By Holding Power Button+Menu Button+Volume Down Button Simultaneously.
Select PDA Tab & Then Choose “clockworkmod-5.0.2.8.tar.md5” File.
You’ve Now Successfully Installed Custom Recovery Over Stock Recovery.
Now Switch Off Your Phone & Enter Into The Recovery Mode (CWM Recovery). Recovery Mode Can be Entered Holding Power Button + Home Button+ Volume Up + Volume Down Button Simultaneously.
As Soon Recovery Mode Appears Press Menu Button To Grey out The Screen.Keep Your Device in Recovery Mode As We Will Require It For Rooting.
Extract RootMe.zip Which You’ve Downloaded Before.After Extracting You’ll Find runme.bat File in Extracted Folder.
Again Connect Your Device To The Computer (Which You’ve Kept in Recovery Mode).
Run runme.bat For Rooting Process To Begin.
Reboot The Phone After Process Gets Over.
After Restarting Your Device You’ll Find That The App Called Superuser is Installed.
Congratulations !! By This Time You’ve Successfully Rooted Your Device With Custom Recovery Installed.Now In Case If You Face Any Difficulty in The Process Given Above, Do Let Me Know in Comments, I Will be There To Help You As Soon As Possible.
Odin3.zip - [Click for QR Code](194.6 KB, 26799 views)
RootMe.zip - [Click for QR Code](1.73 MB, 66831 views)
12:52 AM Edit Apk No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | June 25, 2013 | 1 Reply
APK Edit Tool တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ
ဒီအထဲမှာပဲ အလွယ်ဆုံးပြင်ဖို့အတွက် Virtuous Ten Studio ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့မေ့တော့မလိုပဲပြောမလို့ .Net 4.0 လိုအပ်သေးတယ်..နော်။
ပြီးသွားရင် Tool ကိုဒီမှာသွားဒေါင်းလိုက်ပါ။
ကဲဒေါင်းပြီးရင်တော့ Install လုပ်လိုက်ပါ။
ကဲ ပြီးသွားရင်တော့ File မှာ New Project ကိုရွေးပြီး မိမိ Edit လုပ်ချင်တဲ့ apk ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Project Name တို့ Solution Name တို့ပေးပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်ပါ။
ကျွှန်တော်အောက်မှာပြထားတာကတော့ ကိုသူရိန်ရဲ့ Myan Keyboard ကိုထည့်ပြထားတာပါ။
အဲပုံလေးထည့်က res Folder ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Values ဆိုတဲ့ Folder လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.. ၀င်လိုက်ပါ။
ကဲ Notepad လေးမှာဖွင့်ပြီးမြန်မာလိုရေးလိုက် Copy paste ချလိုက်ပေါ့ဗျာ။
ကဲအားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Build All ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ My Document ထဲက ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလိုက်ပါ
Virtuous Ten Studio\_Projects\_binary ထဲမှာ မိမိ ပြင်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဖြိုးချမ်း (Founder At MMSD)
2012 Xperia Devices တွေအတွက် Firmware များ စုစည်းမူ
12:49 AM Sony No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | February 25, 2013 |5Replies
2012 Xperia Devices တွေအတွက် Firmware တွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်….
အားလုံးက Offical တွေပါပဲ…..
Flash Tool ကနေ Flash ရုံပါပဲ..
အောက်မှာ Version နဲ့တကွတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
Xperia T(LT30P) Version 4.1.2 Jelly Bean
Xperia V (LT25i) Version 4.1.2 Jelly Bean
Xperia ion (LT18i/h) Version 4.0.4 ICS
Xperia S (LT26i) Version 4.0.4 ICS
Xperia SL (LT26ii) Version 4.0.4 ICS
Xperia J (ST 26i) Version 4.0.4 ICS
Xperia Tipo (St21i) Version 4.0.4 ICS
Xperia Tipo Dual (St21i) Version 4.0.4 ICS
Xperia Miro (St23i) Version 4.0.4 ICS
Xperia Go (St27) Version 4.0.4 ICS
Xperia Sola (MT27i)Vesion 4.0.4 ICS
Xperia P (LT 22i) Version 4.0.4 ICS
Xperia U (St 25a) Version 4.0.4 ICS
Xperia NeoL (MT25i) Version 4.0.4 ICS
ဖြိုးချမ်း (Admin At MMSD)
Huawei All In One Recovery Flashing Tool (Latset Version)
12:47 AM Huawei No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | February 28, 2013 | 27 Replies
အသစ်အနေနဲ့ကတော့ C8813 တို့ Y300 တို့ G10 တို့ပါလာပါတယ်…..
Custom Recovery သွင်းလို့ရတဲ့ Tool လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီ Recovery သွင်းပြီးရင်တော့ Root ပဲဖြစ်ဖြစ် Root မလုပ်ပဲလဲမြန်မာစာသွင်းလို့ရမှာပါ…
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖုန်းကိုရွေးကို လုပ်ရုံပါပဲ….
ဖုန်းကိုတော့ Fastboot mode အနေနဲ့အထားမှာထားရမှာပါ….
ဖုန်းကိုမှားရွေးမိရင်လဲ Error မရှိပါဘူး..
တစ်ချို့ဖုန်းတွေကတော့ Bootloader ရှိနေလို့ Unlock Bootloader လုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေမှာပါ……
နောက်ပိုင်းမှာပဲ Update လေးတွေထပ်ပြီးလုပ်သွားပေးဖို့ရှိပါတယ်..
ဒီတော့ ကိုယ်ရဲ့ Computer မှာ File တွေများမနေတော့ပါဘူး..
ဒီအထဲမှာပါတဲ့ Recovery တွေကလဲ Stable တော်တော်လေးဖြစ်တဲ့ Recovery တွေကိုပဲသုံးထားတာပါ…..
12:46 AM Android No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | March 5, 2013 |6Replies
Y210T တွေကို Root ဖောက်တဲ့အခါ Wifi Error တက်ပါတယ်..
ဒီတော့ Wifi Error ကိုဖျောက်လိုက်ရအောင်နော်…
အရင်ဆုံးကိုယ့်ဖုန်းကိုလေ့လာရမှာက Build Number ပါ…
Y210-0010,Android 2.3,V100R001C17B839 ဒီ Build Number ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြေအောင်
မဟုတ်တဲ့သူတွေကလဲ ဒီ Firmware လေးကို ဒေါင်းပြီးတင်လိုက်ပါ…..
ကဲပြီးသွားရင်တော့ Root အရင်လုပ်နည်းရေးပေးလိုက်ပါတယ်…
Volume Down + Power နဲ့ ဖိနှိပ်လိုက်ပါ…
ကြိုးထိုးပြီး အပေါ်က Y210T Insecure Boot Changer ကိုနှိပ်လိုက်ပါ…..
Cmd Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်…
Enter နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ခေါက်လိုက်ရင် Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်…
ပြန်တက်လာရင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Root Tool နဲ့ Root ဖောက်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Wifiကို အမှန်ခြစ်ကြည့်မရတော့ပါဘူး…
Volume Down + power နဲ့ Fastboot Mode ပြန်ဝင်လိုက်ပါ..
ပေးထားတဲ့ Program က အောက်ကစာကြောင်း
Y210Y Stock Boot Changer ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..
ကဲ ဖုန်းက ပြန်တက်လာရင်တော့ wifi ကိုအမှန်ပြန်ခြစ်လို့ရသွားပါပြီ။
ZawGyi Font Installer (Root လုပ်ပြီးသောဖုန်းများနှင့် Samsung Devices များအတွက်)
12:43 AM Samsung No comments
ROOT လုပ်ပြီးသွားရင် မြန်မာဖောင့်ပြောင်းဖို့ Apk နဲ့ Keyboard ကတော့
ထည့်ရမှာပဲနော်… ဒီတော့ PC Suite တွေကတစ်ခါတစ်လေကြောင်တက်
တယ်… 91 ဆို ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်….
SD Card ထဲကိုတစ်ခါထည့်ရ Install လုပ်ရနဲ့အာရုံနောက်တယ်..
ဒီတော့ကိုယ်သုံးဖို့ Tool လေးတစ်ခုရေးရင်းပြန်ပြီးမျှဝေလိုက်မယ်….
မြန်မာ Developer တွေကိုလဲ Credit ပေးပါတယ်….
Free App တွေကို သုံးသလို Paid App တွေကိုလဲသုံးပေးဖို့အားပေးပါတယ်…
ဒီ Software လေးကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Font Changer ကို USB Debugging နဲ့
Unknown Sources ကို On ပြီး သွင်းရုံပါပဲ…
Zawgyi one ttf ဆိုတာကတော့ Samsung Galaxy တွေမှာ Root မလုပ်ပဲ Display ထဲက
Font Style ကိုပြောင်းပေးမဲ့ Zawgyi one.apk လေးဖြစ်ပါတယ်..
ကျွှန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ MPX Font Changer နဲ့ Frozen Keyboard ပါပဲ…
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | March 7, 2013 |9Replies
ဒီ All In One UnlockBootloader Tool Kit လေးကနေ မိမိနှစ်သက်ရာဖုန်းအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်…..
ဒီ Tool လေးရဲ့အားသာချက်ကတော့ဘယ်ဖုန်းကိုမဆိုမြန်မြန်လေး Unlock လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်…
Offline သုံးရတာမျိုးပါ… Unlock လုပ်ဖို့ကတော့ Connection မလိုပါဘူး
Error လဲတက်စရာမရှိပါဘူး…. လိုချင်တဲ့အမျိုးအစားကိုနှိပ်လိုက်ရင်
အသုံးပြုရတာလွယ်အောင် Read Me လေးတွေပါထည့်ပေးထားပါတယ်……..
စာရွက်ပုံလေးနဲ့ဟာလေးက Read Me လေးပါ..
ကိုယ်လုပ်မဲ့ ဖုန်းကိုရွေးပြီးရင် Read Me မှာထပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်..
Huaewi Bootloader Unlock State
ပထမဆုံး Huawei လို့ရေးထားတဲ့ Button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Button လေး သုံးခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်…
Request Code (China) ဆိုတာကတော့ Huawei တရုတ် Website မှာ Unlock Code သွားတောင်းဖို့ပါ။
Request Code (English) ဆိုတာကတော့ Huawei English Web site မှာ Unlock Code သွားတောင်းဖို့ပါ။
Unlock လုပ်မဲ့ဖုန်းကို Data တွေအကုန် Back up လုပ်ထားပါ…..
ပြီးရင်ဖုန်းဟာ Fastboot အနေအထားမှာဖြစ်ရပါမယ်…….
Code ရပြီးသွားတဲ့သူတွေကတော့ Ready To Unlock ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ပြီးသွားရင်တော့ Code ၁၆လုံးကိုရိုက်ပြီး Enter နှစ်ချက်လောက်ခေါက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီ..
မိမိရဲ့ Huawei ဖုန်းဟာ Unlock State ကိုရောက်သွားပါပြီ….
Unlock ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Root အပြင် တစ်ခြားသော ကလိစရာများကိုကလိနိုင်ပါပြီ။
ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ Huawei ကိုင်သူတွေအနေနဲ့ Unlock ကိုလုပ်သင့်ပါတယ်…..
User ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်…. User တစ်ယောက်အနေနဲ့လွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်….
ဒီ Tool ကိုဒေါင်းပြီးရင် Read ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်နည်းတွေကျလာပါလိမ့်မယ်….
Sony Unlock Bootloader State
Sony တွေကို Unlock လုပ်ဖို့အတွက် ဒုတိယ Button ဖြစ်တဲ့ Sony ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
အရင်ဆုံး Unlock Bootloader လုပ်ဖို့ကတော့ Unlock Code လိုိတာပါပဲ…
Request Code ကိုနှိပ်လိုက်ပါ….
Sony တွေရဲ့ Unlock Code ပေးတဲ့ Site ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်…..
ပြီးသွားရင်တော့ Imei ကိုနောက်ဆုံးတစ်လုံးဖြတ်ပြီး
ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကို Unlock Code ကျလာပါလိမ့်မယ်..
ပြီးသွားရင်တော့ဖုန်းကို Fastboot Mode အနေအထားရောက်အောင်ထားလိုက်ပါ။
Ready To Unlock ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Code ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Unlock လုပ်နိုင်ပါပြီ။
HTC Unlock Bootloader State
ကဲ HTC တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ HTC Button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်
HTC DEV ကိုသွားချင်ရင်တော့ အပေါ်ဆုံးက Button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Login ၀င်ပြီးရင် Unlock Bootloader ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Identifier Token ကိုတော့ ဒုတိယ Butoon မှာရယူရမှာပါ..
ဖုန်းကို Volume Down + Power ကိုနှိပ်ပြီး Bootloader ခေါ်လိုက်ပါ..
Fastboot ကိုတွေပါလိမ့်မယ်…. နှိပ်ပြီးကြိုးထိုးလိုက်ပါ။
Request Identifier Token ကို နှီပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Token ပေးပါလိမ့်မယ်..
HTC DEV က ဒီနေရာမှာ
ပြီးသွားရင်တော့ Email ပို့ပါလိမ့်မယ်……
ဒေါင်းလိုရလာတဲ့ Unlock_code.bin ကို Copy ကူးထားလိုက်ပါ။
Ready To Unlock ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Folder လေးဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်..
Copy ကူးထားတဲ့ Unlock_code.bin ကို Paste လုပ်လိုက်ပါ…
HTC.bat ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်..
ပြီးသွားရင် Enter နှစ်ချက်ခေါက်လောက်ပါ…
Other Devices ကတော့ Nexus နဲ့တစ်ခြားသောဖုန်းတွေအတွက်ပါ။
All In One HTC Recovery Flashing Tool (Version 1.0)
12:37 AM Android No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | March 9, 2013 |7Replies
ဒီတစ်ခါတော့ HTC အတွက်ပါ..
HTC ဖုန်းတွေအတွက် Custom Recovery တွေကို ထည့်သွင်းဖို့ Tool လေးတစ်ခုရေးပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒီ Tool ကို ပထမဆုံး Version အနေနဲ့ ၁၂လုံး Recovery သွင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်…..
လိုအပ်ချက်ကတော့ Bootloader Unlock ရရင် ရပါပြီ…
HTC Bootloader Unlock ကိုတော့ ဒီ Tool လေးနဲ့ လွယ်လွယ်လုပ်လိုက်ပါ။
Unlock Bootloader လုပ်ပြီးရင်တော့ All In One HTC Recovery Flashing Tool ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
လုပ်ပြီးရင်တော့ Fastboot အနေအထားကနေလုပ်ရုံပါပဲ..
အရင်ဆုံး Software ကို Run လိုက်ပါ။
ကဲပြီးသွားရင်တော့ Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
မေ့နေလို့ Software သမားတွေပျင်းမှာစိုးလို့ သီချင်းပါနားထောင်ရမယ်…
U8661 One Click Root & Zawgyi Font + Frozenkeyboard
12:34 AM Android No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | March 14, 2013 | 11 Replies
ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ U8661 အတွက်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်…..
ဒီ Tool ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Root Access တစ်ခါထဲရမယ်..
Zawgyi Font သွင်းပြီးသားဖြစ်မယ်…
Frozenkeyboard ကို System App အဖြစ်သုံးလို့ရပါမယ်…..
Zawgyi Font Developer နဲ့ Frozen Keyboard Developer တွေကို Credit ပေးပါတယ်…
ဒီ Tool ကိုတော့ကိုမျိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီးရေးသားထားတာပါ။
Ready To Root Your Devices ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်….
Fastboot Mode ၀င်လိုက်ပါ….
Volume Down + Power ကိုဖိနှိပ်လိုက်ရင် Fastboot Mode ရောက်ပါပြီ။
ပြီးရင် Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်…..
ဖုန်းကို လုံးဝ ပြန်တက်လာတဲ့အထိစောင့်လိုက်ပါ။
ပြန်တက်လာပြီ… Driver လဲသိပြီဆိုရင် Enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ……
Recovery Mode ကိုသွားနေပါလိမ့်မယ်…..
Recovery Mode ရောက်ပြီဆိုရင် Enter တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်ပါ…
ကဲပြီးသွားရင်တော့ ဖုန်းဟာ Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်…….
Super User,Zawgyi Font,Frozen Keyboard အကုန်ပါလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်…
One Click လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့ Enter သုံးချက်လောက်ခေါက်ရပါလိမ့်မယ်….
အဆင်ပြေအောင် Tool မှာ Read Me လေးထည့်ပေးထားပါတယ်….
12:32 AM Android No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | March 14, 2013 | 17 Replies
12:29 AM Huawei No comments
Offline အနေနဲ့ U Series နဲ့ C Series တွေကို လုပ်နိုင်မှာပါ..
Online ရှိသူတွေအတွက်ကတော့ Driver တွေနဲ့
MTK Recovery တွေ Root တွေ
Spereadtrum Root တွေကို Download ဆွဲနိုင်မှာပါ.
Download ပြီးသွားရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်….
Y220T Camera Error အတွက် ဒီထဲမှာပါတဲ့ Recovery ကိုပြန်ဒေါင်းပြီး သွင်းပါ.
ပြီးရင်ပေးထားတဲ့ Root.zip ကိုဒေါင်းပြီး Recovery ကသွင်းရင်ရပါတယ်…
MTK Driver တွေကိုပေးထားပါတယ်..
Flashable Zip များကို ကူညီပေးသူများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ကျန်တဲ့ Developer တွေကို Credit ပေးပါတယ်….
12:26 AM Samsung No comments
ဖိုးချမ်း(Admin At MMSD) | April 20, 2013 |5Replies
Sasmung တွေ အတွက် Custom Recovery သွင်းနိုင်မဲ့ Tool လေးဖြစ်ပါတယ်…
Software ကို ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
စောင့်ချင်သူတွေစောင့်ပါ.မစောင့်ချင်သူတွေ Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖုန်းကိုရွေးလိုက်ပါ။
ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Odin ဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်..
PDA ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Desktop ပေါ်မှာ MMSD Samsung Recovery ဆိုတဲ့ Folder လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်..
၀င်လိုက်ပါ။ အထဲကို ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် Tab ဖြစ်ဖြစ် Download Mode ၀င်ပြီး Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Root လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် MM Font သွင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
Flashable Zip ဆိုတဲ့ Button လေးကိုနှိပ်ပြီးရယူလိုက်ပါ။
Desktop ပေါ်မှာ Zip ဖိုင်လေးတွေတွေ့ပါအုံးမယ်….
User Guide PDF ကို လဲ ကြည့်လို့ရပါတယ်..
Join Us ကို နှိပ်ပြီး MMSD Facebook Group ကိုလာရောက် Join လို့ရပါတယ်..
12:14 AM Android No comments
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) | May 7, 2013 | 22 Replies
ဒီနေ့ကတော့ ကျွှန်တော်ရဲ့ ၂၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့မှာအမှတ်တရဖြစ်အောင် Tool တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။
ဒီ Tool လေးကတော့ Mydroid Tool ပါပဲ။
Featured MM Font + Frozen Keyboard
မြန်မာစာ နဲ့ လက်ကွက် ထည့်သွင်းခြင်းလမ်းညွန်
၁။ မြန်မာစာနဲ့လက်ကွက်ထည့်သွင်းရဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ Root Access ရှိရပါမယ်။
၂။ USB Degugging နဲ့ UnKnown Sources ကို On ထားပါ။
၃။ မိမိရဲ့ ဖုန်းဟာ Computer နဲ့ Detect သိတဲ့အနေအထား ADB Driver သိရပါမယ်။
၄။ အထက်ပါ ပြီးပြည့်စုံလျှင် One Click အနေနဲ့အမြန်ဆုံး မြန်မာစာ နဲ့ မြန်မာလက်ကွက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
သတိပေးချက်။ ။ ၁။ 2.3 ကနေ 4.0.4 အထိ MM Font + Frozen Keyboard ကိုရွေးချယ်တာအကောင်းဆုံးလို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားဟာတွေရွေးချယ်ရင်လဲ Error လုံးဝမရှိကြောင်းအာမခံပါတယ်။
၂။ 4.1(Jelly Bean) တွေကိုတော့ MM Font + FrozenKeyboard Pro ရွေးချယ်ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ အရေးအကြီးဆုံးသတိထားရမှာကတော့ မိမိဖုန်းဟာ မြန်မာစာထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်နေရင်အသုံးမပြုပါနဲ့။
Pattern & Password Delete
၁။ မိမိ ရဲ့ဖုန်းဟာ Root Access နဲ့ USB Debugging ကို On ထားရပါမယ်။
၂။ Pattern & Password ဖျက်ရင်သူတွေက Pattern & Password Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၃။ Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၄။ Computer နဲ့မသိဘူးဆိုလျှင် Error ပြပါလိမ့်မယ်။
၅။ Root မရှိလျှင် Error ပြပါလိမ့်မယ်။
၆။ Error မပြပဲ Progress Bar 100% ပြည့်သွားရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ Pattern ဖြစ်ဖြစ် Password ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
၂။ Factory Reset (DATA များ အကုန်ပျက်ပါလိမ့်မယ် SD Card ထဲက DATA များမပါပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင် BACk Up လုပ်ထားပါ။)
၆။ Error မပြပဲ Progress Bar 100% ပြည့်သွားရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ Fully Wipe Data အသစ်အတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၁။ မိမိ ရဲ့ဖုန်းဟာ USB Debugging ကို On ထားရပါမယ်။
၂။ Recovery Mode ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၅။ Error မပြပဲ Complete စာတန်းပေါ်လိုက်ရင်တော့ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ Recovery Mode ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ Fastboot Mode ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၅။ Error မပြပဲ Complete စာတန်းပေါ်လိုက်ရင်တော့ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ Fastboot Mode ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Download Mode (For Samsung)
၂။ Download Mode ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၅။ Error မပြပဲ Complete စာတန်းပေါ်လိုက်ရင်တော့ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ Download Mode ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Google Apps များသွင်းခြင်းလမ်းညွန်း။
2.3 Gapps Installer
၂။ 2.3 Gapps Installer ကိုနှိ်ပ်လိုက်ပါ။
၁။ မိမိဖုန်းရဲ့ Version ကိုကြည့်ပြီးသွင်းပါရန် မှားယွင်းသွင်းမိရင် Firmwae ပျက်တက်ပါတယ်။
၂။ Google Service တော်တော်များများကိုသွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ မပါရှိသေးတဲ့ Google Apk များကို ဆက်လက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Tool ကနေသွင်းပြီးတာနဲ့နောက်ပိုင်း Google Application များကိုဆက်လက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဖုန်းများအတွက် GTalk, Gmail,Play Store များကို အဓိကသွင်းပေးထားပါတယ်။
LOGO ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးသော MMUC Admin ကိုချီလီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။